Mota flywheel fekitori, vatengi - China Mota flywheel Vagadziri
chigadzirwa zita: Mukati mhete giya 6CT
motokari zita: Cummins
Yekuwedzera nhamba: 3415350 3415349
Inokodzera mota mamodheru: 6CT8.3
Pamugumo wemagetsi kubuda kwe crankshaft, ndiko kuti, iro divi iro bhokisi regear nemidziyo yekugadzira-basa zvakabatana. Basa guru reiyo flywheel kuchengetedza simba uye inertia kunze kwesimba reinjini. Kune mana-sitiroko injini, chete simba rekukweva, kumanikidza, uye kupedza kweimwe sitiroko kunouya kubva pasimba rakachengetwa muflywheel. Chiyero chinogadziriswa zvisirizvo. Chiyero cheinjini chinonyanya kunoenderana neyakaenzana block pane shaft. Iyo imwechete-humburumbira muchina ine yakasarudzika shaft shaft.
Iyo flywheel ine yakakura nguva yeinertia. Sezvo basa reimwe humburumbira yeinjini risingagumi, kumhanya kweinjini kunochinjawo. Kana iyo injini kumhanya ichiwedzera, iyo kinetic simba yeiyo flywheel inowedzera, kuchengetedza simba; kana iyo injini kumhanya ikadzikira, iyo kinetic simba yeiyo flywheel inoderera, ichiburitsa simba. Iyo flywheel inogona kushandiswa kudzikisira kumhanya-mhanya kukurumidza panguva yekushanda kweinjini.
Iyo yakaiswa kumashure kwekupedzisira kweinjini crankshaft uye ine kutenderera inertia. Basa rayo nderekuchengetedza simba reinjini, kukurira kushorwa kwezvimwe zvinhu, uye kuita kuti crankshaft itenderere zvakaenzana; batanidza injini uye mota kufambisa kuburikidza nekiringi yakaiswa pane flywheel; uye kutanga Injini iri kuita kuti injini itange. Uye iko kubatanidzwa kwecrankshaft chinzvimbo chekubata uye mota yekumhanya kuona.
Mukurohwa kwesimba, simba rinofambiswa neinjini kune crankshaft, pamusoro pechibuditsa chekunze, chikamu chesimba chinosungirwa newhewheel, kuitira kuti kumhanya kweiyo crankshaft kusazowedzera zvakanyanya. Mune kurova katatu kwekubvisa, kudya uye kumanikidza, iyo flywheel inoburitsa simba rayo rakachengetwa kuripa basa rakashandiswa nemavara matatu aya, kuitira kuti crankshaft kumhanya isadzikire zvakanyanya.
Uye zvakare, iyo flywheel ine zvinotevera mabasa: iyo flywheel ndiyo inoshanda chikamu cheiyo yekukwikwidza batira; iyo flywheel mhete giya yekutanga injini yakaiswa pane iyo flywheel rim; yepamusoro yakafa nzvimbo mucherechedzo yakanyorwawo pane flywheel ye calibrationIgnition nguva kana peturu jekiseni nguva, uye gadziridza vharuvhu clearance.